China Waste Plastic Pyrolysis Plant factory na-emepụta | LYBH
Usoro ọgwụgwọ (nke ndị ahịa nyere)
Mgbe plastik ahụ na-emefu mebiri emebi, kpọnwụọ, gwerie, na usoro ndị ọzọ, ha nwere ike nweta oke kwesịrị ekwesị.
A na-ebuga plastik a na-ekpofu ahịhịa na mkpogharị mgbanwe.
Usoro pyrolysis na-aga n'ihu
A na-eri nri plastik a na-ekpofu na-abanye na pyrolysis chernobyl site na feeder maka pyrolysis.
Ngwongwo akụrụngwa na-ekpo ọkụ na-ejikarị gas na-enweghị ike imepụta gas nke pyrolysis nke plastik na-ekpofu na-ekpo ọkụ, a na-agwakọta ikuku ọkụ na-ekpo ọkụ na gas a na-emegharị iji nye okpomọkụ dị mkpa.
Mmanụ na gas jụrụ nkewa usoro
Mgbe mmanụ na gas sitere na pyrolyzer na-aga n'ihu na-eme ka ọ dị jụụ ma kewapụ, mmanụ mmanụ na-abanye na mmanụ na-anakọta mmanụ ma na-ebuga ya na mpaghara ebe a na-agbanye mmanụ site na mgbapụta mmanụ, na gas na-enweghị ike ịgbanye ume na-abanye n'ime usoro ikpocha gas na-ere ọkụ.
Combustible gas ọcha usoro
A na-eme ka gas dị ọkụ nke a na-enweta site na pyrolysis dị ọcha site na usoro nhichapu gas na-ekpo ọkụ ma webata ya n'ime tank nke na-eme ka nrụgide na-arụ ọrụ site na nrụgide nke ngwaọrụ nrụgide site na mmiri akara mmiri. a na-eji okpomọkụ sitere na combustion mee ihe maka pyrolysis nke taya na-ekpofu ahịhịa.
Sistem na-edozi mmanụ ọkụ siri ike
The elu-okpomọkụ siri ike ngwaahịa mepụtara na-aga n'ihu pyrolysis gas na-ebu ihe siri ike ngwaahịa silo site ebu mgbe mma ka mma okpomọkụ site multi-ogbo mmiri jụrụ.
Flue gas ọcha usoro
Mgbe recycled iyuzucha gas na mma, ọ abatakwa ájá na isi mwepụ ụlọ elu na flue gas ọcha ụlọ elu. Mgbe nchacha nke otutu, dị ka sistemụ plasma eletriki a na-ekpochapu uzuzu na sistem mwepụ ísì UV, ọ na-erute ọkọlọtọ maka nsị.
Usoro mmepụta ahụ nakweere sistemụ njikwa PLC / DCS na nyochaa nnyefe data na igwe ojii iji mee nlezianya oge ọ bụla ọnụ ma zipụ ya site na igwe ojii gaa njikwa ahụ. Isi akara nwere ike ịchọpụta nchekwa nchekwa nke taya na-enweghị ọgụgụ isi.N'otu oge ahụ, ọrụ nke nnweta data, ngụkọta oge, ndekọ, mpempe akwụkwọ mbipụta na ntinye tupu nchekwa iji hụ nchekwa, nkwụsi ike na ọrụ na-aga n'ihu nke usoro mmepụta.
1.Automatic na-aga n'ihu mmepụta, elu uzu, ezi mmanụ mma;
2.Fully akpaka, elu okpomọkụ, kaa akara slag, gburugburu ebe obibi-echebe ma dị ọcha na-enweghị ájá.
3.The pụrụ iche mgbochi osisi mgbidi ngwaọrụ nwere ike na-aghọta na-aga n'ihu mmepụta nke pụrụ iche ngwaọrụ.
4.Large njikwa ikike, kwa ụbọchị njikwa ikike ruo 50-100 tọn.Enweghị mmanụ, a na-agbake gas na-abụghị condensable mepụtara pyrolysis iji kwado combustion.
5.Enyocha gburugburu ebe obibi na enweghị mmetọ, (nwere ike izute ụkpụrụ nke ọgwụgwọ mkpofu izugbe) mba patent desulfurization ájá, wepụ ájá na anwụrụ ọkụ acid na ájá.
6.Mfe iji rụọ ọrụ ma chekwaa ọrụ.
Waste taya, n'efu roba, n'efu plastic, n'efu acrylic, sludge, ahihia ezinụlọ
3.Mkpụrụ mmanụ dị maka nhazi pyrolysis
Mbanụ. .Dị Mkpụrụ mmanụ
1 Ịkwanyere / PITA Enweghi ike imeghari
2 Pee 95%
5 Plastic eriri 80%
7 Akpa rọba 50%
Nke gara aga: N'efu ụlọ pyrolysis osisi
Osote: Na-aga n'ihu ahihia Taya Pyrolysis Osisi
30-40tpd Pyrolysis n'ihu Equipment
Akpaaka Pyrolysis Akụrụngwa
China Waste Taya nọgidere Pyrolysis Equipment
Na-aga n'ihu Taya Pyrolysis Osisi
Na-aga n’ihu n’ihu Ihe mkpofu Pyrolysis
Pyrolysis akụrụngwa Bjl5-30tpd Chinese
Ngwunye Pyrolysis maka Taya
Usoro Ntugharị Taya
Ntughari Taya na Mmanụ
Ngwa Ngwongwo Taia
Ngwá Ọrụ Pyrolysis Ejiri Ejiri
Pyrolysis Plastic na-ekpofu ahịhịa
Pyrolysis Rubber Rubber
Imefusị Taya mkpofu
Ngwa ọgwụgwọ ọgwụgwọ
Waste Taia / Rubber egweri Pyrolysis Equipment
Waste Taya nọgidere Pyrolysis Equipment Chinese rụpụta
Waste taya Pyrolysis Plant Machinery
A ga-agbajikwa iberibe taya mgbe eriri na-ebu belt, eriri belt, ihe nkedo, wdg na nrụgide na-adịghị mma na usoro pyrolysis na-aga n'ihu site na pyrolysis, na usoro mgbe gas na-emeghachi omume okpomọkụ 450-550 ℃ n'okpuru ọnọdụ nke ngwa ngwa ngwa ngwa pyrolysis mmeghachi omume, mepụta mmanụ pyrolysis, carbon carbon, waya pyrolysis na gas combustible, gas combustible site na nkewa nke mmanụ na gas mgbake unit mgbe banye n'ime ọkụ gbawara stovu ọkụ, maka dum producti ...
Ogbe Pyrolysis Osisi, Na-aga n'ihu Pyrolysis Osisi, Plastic imegharị ihe maka iji igwe, Imefusị Taya Recycling Machine, Imefusị rọba, Taya Pyrolysis,